musha FOOTBALL MANAGER Nuno Espirito Santo Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeMutungamiri weBhola uyo anonyanya kuzivikanwa nezita rezita rokuti "O Substituto". Nuno Yedu Espírito Santo Utano Nhau pamwe Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvika panguva. Kuongorora kunosanganisira mhuri yake, nyaya yehupenyu musati mazita, kusimudzirwa mukurumbira nyaya, ukama uye hupenyu hwehupenyu. Mukuwedzera, zvimwe zvisiri izvo zvisinganyatsozivikanwi nezvake.
Hungu, munhu wose anoziva nezvehutungamiri hwake hwekushanda naWolverhampton Wanderers. Zvisinei, vashomanana chete vanoona Nuno Espírito Santo's Biography iyo inofadza chaizvo. Iye zvino pasina kunze kwekuita, ngatitangei.
Nuno Espirito Santo Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts-Upenyu Hwekutanga
Kutanga, zita rake rose ndiNuno Herlander Simoes Espírito Santo. Nuno akaberekwa musi we 25th musi waJanuary 1974 muSão Tomé nePríncipe, rudzi rwechiwi rweAfrica ruri kuEquator muGulf yeGuinea, Central Africa.
Nuno akaberekwa semwana anonyara uye akanyarara kuvabereki vake vane mazita asina kuramba asingazivikanwi. Zvisinei, achikura, akawana simba rake rechokwadi sezvaaipindira mumakwikwi eSa Tome football. Nuno akaonekwa semunhu asina simba uye ane simba anoda kubatsira vamwe uye kunyange semukomana muduku, aigona kuona zvinhu asingasaruri.
Pakutanga muhupenyu hwake apo Nuno akanga ane 10, chisarudzo chakaitwa naamai vake nababa kubva kuSao Tome. Nuno mhuri yaNuno Espirito Santo yaifanira kutamira kuPortugal kuitira kuti ive nehutano hwemamiriro ehupfumi. Pavakasvika, vaigara muSanto António da Charneca, paruwa yehurumende mumuganhu weBarreiro, Portugal. Iyi ndiyo iyo rwendo rwake rwomutambo rwakatanga.
Nuno Espirito Santo Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts- Youth Career
Mugore 1985 paakanga ari 11, Nuno akatanga bhora rake mudhorobha yebhokisi rebhokisi rainzi Santoantoniense. Sezvo nguva ichienderera mberi, Nuno akafambira kune mamwe makirasi. Akaonekwa nevezera rake semunhu anofara uyo aizoona zviri nyore kuchinja kune chero nzvimbo ipi zvayo yaakamboita bhora rake.
Nuno vechidiki basa rakaparadzana pakati pe1985 ne1992 nevana vakasiyana-siyana vechiPutukezi vechidiki. Sezvaaiva mukomana muduku, aive ane kutsunga kwakasimba kuita kuti zviroto zvake zvekuva muchengeti wezvinangwa zviitike. Izvi zvakaonekwa mumazuva aakamboita nawo Santoantoniense, Quimigal, Caçadores Torreenses uye Vitória Guimarães kwaakapedza huduku hwake.
Nuno Espirito Santo Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts- Musangano Jorgie Mendes
Sezvakaita panguva yekunyora, Vateki vemaBhola vanonyatsotevedzera mutambo vaizoziva hukama pakati paNuno naJorge Mendes. Izvi ndezvechokwadi nokuti zvose pals hazviparadzanisi. Zvino ngatitaurirei kuti vakasangana sei.
Kuchinja kwekutsvaga kweNuno uye gare gare basa rokutarisira rakatanga muPortugal nightclub yakakurumbira mugore re1996. Pausiku hwakaropafadzwa, Nuno akaonana naJorge Mendes uyo aingova mudiki weDVD uye vhidhiyo mutengesi. Zvadaro, akanga asina kufunga nezvechinangwa chekuenda kubhokisi rebhizimisi rebhizimisi. Iyi ndiyo nguva apo Nuno, muchengeti wemugove wemakore 22 akanga achitsvaka zvakaoma nzira yekuita kuti ive huru mumutambo. Usiku ihwohwo, kukurukurirana kusingakanganwiki kwakatanga pakati paJorge naNuno avo vachangobva kusangana pane imwe kambani.
Nuno Espirito Santo Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts- Kuita Jorgie Mendes
Waizviziva here? Usiku ihwohwo, mushure mekunge zvakakwana kutaura pamusoro pemikana, Jorge Mendes akawana kudana kwake, mukana mubhizimusi rebhizimisi rebhola. Chokutanga, akagutsikana Nuno kumubhadhara sevabereki vake vokutanga izvo zvaakabvuma. Vose vari vaviri vaifanira kuisa zvavakaita zvinhu vasati vabva usikuclub.
Zuva rakatevera, Jorge akaendesa Nuno kwemaawa maviri nehafu kuenda kuDeportivo La Coruna kuSpain achida kusangana nemutungamiri webhola yebhola. Paakasvika, Jorge akaita kuti purezidhendi wekambani paNuno aigona kupa zvikonzero nei boka reSpain richifanira kumutengesa. Mushure mokukurukurirana kwakabudirira, Deportivo La Coruna akabvuma kubata kwake. Iyi yakanga iri nguva Jorge Mendes akawedzera kukurudzira kuzarura kambani yake yegoja yebhola iye zvino inozivikanwa se GestiFute. GestiFute iri kure zvikuru kune imwe yepamusoro-shandisi mazano kune vateereri. Kubva panguva iyo, vose vari vaviri vakava shamwari dzakanakisisa dzepedyo.
Sezvakaita panguva yekunyora, zvose Nuno naMendes vanonakidzwa neruzivo rutsva pamwe chete kuWolves. Nhasi, Jorge Mendes ave achipa vazhinji vekuNuno vatambi kunyanya vechikwata vechiPutukezi. Nhasi, zviri pachena kuti iye ane simba guru munyika yose yebhokisi nevatengi vanobatanidza Jose Mourinho, Rui Patricio, Helder Costa, Cristiano Ronaldo, James Rodrguez, João Moutinho etc.
Nuno Espirito Santo Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts- A Mourinho Desciple
Mushure mekunge apedza makore 5 nemaSclub clubs, Nuno akadzokera kuPortugal kuzobatana neCollet Porto. Ikoko akazova a Jose Mourinho mudzidzi wezvokwadi, mumwe munhu angada kufisa bhenekeri kuna Jose uye aizoita zvakanaka paanodanwa.
Nuno aiva nhengo inoremekedzwa yeboka rePorto, mumwe munhu Mourinho kuvimba. MuPortugal, Nuno ainzi O Substituto zvinoreva kuti "The Substitute". Pasinei nekudziya bhenchi, maminetsi mashomanana ekutamba akashanda Jose Mourinho's Porto ichikunda Europe munguva ye 2003 / 2004 semwaka.
Nuno sezvaakaona pasi apa yakakunda Champions League pasi pe Jose Mourinho mu2004 sePolto's reservekeepkeeper.
Kuratidzira Basa Rake Rokutanga: Nuno panguva yake yekuchengetedza basa rakagamuchira kupedza makore akawanda achikweretesa pane kuva chigaro chekugara muchikwata. Pamusoro pebasa rake re 18 mumarudzi matatu akasiyana, Sao Tome akaberekerwa muchengeti wechikwata uye maneja iye zvino akangoita mitsara ye199 uye 102 yevaya vakanga vane chikwereti muchipiri chechiSpanish. Mukurumbira wake wakanakisisa semuchengetedzi wemugove angaramba ari wekutsvaga Champions League mu2004.
Nuno Espirito Santo Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts- Pakutanga Maitirwo Emabasa
Mushure mekurega basa, Nuno akapinda muhutungamiri hwebhokisi achitanga nePortugal football club Rio Ave. Kuvonga shamwari yake uye mutariri Jorge Mendes, akasimuka nekukurumidza.
Jorge Mendes kuburikidza nekushamwaridzana kwake uye chiito chaiva nhengo kune vazhinji vanoita basa risina basa. Chikamu chekukurukurirana kwake chinosanganisira kuita mabhiriyoniire vashandi vake kuti varambe kutenga mabhidhiyo kunze kwekuti mutungamiri wekambani akazogadzirirwa semutungamiriri. Izvo zvaive kuburikidza nekupindira kwekutengesa kwaakaita Mendes 'akawana Nuno basa rake kuValencia kwaakashanda nemumwe wehama dzaNeville.
Nuno akatumidzwa kuti La Liga Mutungamiriri weMwedzi katatu asati asarudza kuregera 29 November 2015. Mushure mokutungamira kwaValencia, Mendes akachengetedza imwe slot yekutarisira kwaNuno kuCroto Porto. Mushure menguva yakazara isina chekuvhara sirivha, Nuno akabudiswa pamabasa ake. Zvakare, akamirira sachigaro wechipiri slot kubva kuMendes.
Nuno Espirito Santo Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts- Akave sei aWoves boss
Mendes akaona zvakare mukana wekuunza shamwari yake Nuno kuWolverhampton mushure mekusawirirana naWamves 'mumiriri wekare Paul Lambert. Iye zvino tinokuudza iwe kuti zvakaitika sei.
Mapurisa aimbova mumiriri wePaul Lambert haana kubvumirana nemuridzi webhiriyoniire wekambani (Fosun) pakusarudza Mendes semukuru wekutsvaga kwechikwata.
Lambert haana kubvumirana nekutengeswa kwechikwata chakatungamirirwa ne-super-agent Jorge Mendes uyo aiva shamwari yepedyo yeWolf's billionaire muridzi weFosun uye aiva mumwe munhu akasarudza dzose dzekambani inobata.
Waizviziva here ... Mhumhi Muridzi weChina Funso (kure kuruboshwe, mberi) akapa Jorge Mendes simba rokutarisira vaviri vari mutambi uye mutariri wekutora. Maitiro aMambert asina kufara akaita kuti mazuva ake ave nenhamba yepakati penyika.
Lambert akabatwa musi waMay 2017 pasinei nekutora timu yaWolves kukunda muzhe yechina ye 2016-17 FA Cup, kukunda 2-1 pamusoro peLiverpool kuAnfield. Pana 31 May 2017, Nuno Espírito Santo akagadzwa kuva maneja weWolves.
Nuno Espirito Santo Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts- The Mentoring
Nuno chiito chekupa mazano akaita vatambi vechiPutukezi vakawanda pasi paJorge Mendes vakabvumirana kubatana naWolf. Chikuru chikuru chakauya mushure mushure mokunge Nuno Espírito Santo akatungamirira boka racho kune Premier League mushure memakore masere musipo. Izvi zvakaitika munguva yake yokutanga seWolverhampton mukuru wekudzidzisa.
Chikwata chakabudirira mukusimudzirwa kwavo nemakwikwi mana akasara mumwaka. Vakasimbiswa semakwikwi nemitambo miviri kuti varege. Paakanga achigadzirira musarudzo weParamende misi ye 2018-2019 semwaka, Jorge Mendes akachengetedza vatambi vechiPutukezi izvo; Diogo Jota, Joao Moutinho, Ruben Vinagre uye Rui Patricio muchikwata.
Iyi inotenderera chiPutukezi inofarira Nuno uyo asati amboedza kuvanza chikwereti chake kune guru. Nuno sapanguva yekunyora ndeimwe yemhando dzepamusoro dzebhola mumutambo wekutanga.
Nuno Espirito Santo Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts- Zvimwe Zvako
Bruno Alves, nhengo yeboka reNuno munguva yemakore ekupedzisira kuPorto akamutsanangura se "mukuru asina chidzitiro'. Pamusoro pezvinyorwa zvake, Nuno aive munhu anofara kwazvo uyo anoziva nzira yekukurudzira vamwe vake. Akanga akagara akagadzirira kuteerera uye kubatsira paakadanwa. Kare kare mubasa rake, kana mumwe munhu akundikana, Nuno ndiye anogara ari wokutanga kukurudzira. Kana mumwe weboka rake-vakaroorana ari pasi, ndiye achava wekutanga kuedza zvakare kumusunungura. Pasinei nezvose izvi, akabvuma kuva bhendi inopisa kuitira kuti mumwe muchengeti wepamba afare.
Vashandi pamwe naye muboka rake vaikurumidza kukumbundira Nuno pavanoronga vavariro. Jose Mourinho akambozviisa zvakajeka. "Paunenge uine Nuno," akati. "Iwe haufaniri kunetseka pamusoro pekupfeka."
Pakupedzisira, unhu hwaNuno hwakagadziridzwawo nehutano hwekufambisa yaakamboisa kune zvinokuvadza basa rake. Somuenzaniso, mu2010, Hulk naCristian Sapunaru vakagamuchirwa kwemwedzi mina yekurwisana nevatariri paimba yevanopikisa Benfica. Kunyange vamwe vatambi uye vateki vakavatsoropodza, Nuno akadzivirira vatambi vake. Chiito ichi chakaita kuti ave nemashoko ake echokwadi; Somos Porto zvinoreva (Tiri Porto).
Mumashoko ake ...
"Hapana munhu achatidzinga kubva kwatiri," iye akapfira. "Hakuna, hapana, kusaruramisira kunobvisa kubatana kwedu. Isu tiri Porto uye ticharamba tichiri "
KuNuno, kodzero uye zvisakarurama zvechiitiko chacho ndezvechipiri. Kuchengetedza boka uye kusimuka kweboka rake-vakaroorana zvose zvaikosha kumwoyo wake mutsa.
Nuno Espirito Santo Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts- Ikusakwana
Pasinei nevakawanda vakadana nezita rake, Nuno akamboratidza zvimwe zvakakwana zvekusakwana pane iyo. Izvi zvakaitika apo akatsamwisa Neil Warnock uyo akambotuka Nuno se 'kunyadziswa'. chitsamba: Vasati vasangana, Warnock akafara chaizvo kuva naNuno kuCardiff.
Zvakaitika sei! Warnock akambonzwa achinetseka sezvo akarasikirwa nemirairo miviri yekugadzika neCardiff team yaive yatova imwe yemo kusvika kuNuno. Mushure mechikwata, akanzwa akaodzwa mwoyo naNuno uyo pane kugunun'una maoko ake akamhanyira mukati maro nevashandi vake kuti vapemberere sokunge akanga achangobva kutora FIFA World Cup.
Paakabvuma chikanganiso chake, Nuno akamhanyira kuna Walnock ane shungu nokuda kwekubata ruoko, nguva ino yakanga yakanyanyisa. Akawana muchengeti wemakore 69 musingafungi kuti mumugamuchire. Warnock akazoonekwa achidzoka achiudza Nuno ku f ** k kubva.
Tarisa vhidhiyo yekurwisa pasi;
Nuno, zvakadaro, achirikumbira ruregerero mushure memutambo, achitaura kuti manzwiro ake akaita kuti ave nani. Akakurumidza kutaurwa kuvanyori venhau pamusoro pekuenda kunoona maneja akatsamwa akanga atadzira. Paakanzwa izvozvo, Warnock akapindura achiti:
"Handisi kupa F ** K zvinoreva Nuno. Handizobvumiri kukumbira ruregerero. Ndikushayikwa kwekirasi uye kunyadziswa kwakakwana. Ndaishandisa mazwi akasimba uye ndaireva chimwe nechimwe chazvo. Anofanira kudzidza kuti muBritain yebhola iwe une tsika uye zvishoma zvekirasi pawakakunda mutambo. Handifungi kuti ndichapinda muhofisi yangu kusvikira apedza. Handidi kumuona usiku huno kana ndakatendeseka. Ndaifunga kuti yakanga iri mutsara mukuru uye haifaniri kupedza saizvozvo. "
Nuno Espirito Santo Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts- Ukama Hupenyu
Peharbs, vateveri vakawanda vebhobho vakabvunza mubvunzo; Ndiani Nuno Espirito Santo Wife kana musikana?. Chokwadi chinotaurirwa, panguva yekunyora chikamu ichi, hukama hwehukama hwaNuno mumapeji ake ehupfumi hahuna ruzivo rwehupenyu hwake hwega.
Senguva yekunyora nyaya ino, WhoDatedWho yakatsigira kuti hakuna marekete pamusoro pehukama hwehukama hwaNuno Espírito Santo.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nokuverenga Nuno Espirito Santo Utano Nhau pamwe Untold Biography Facts. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukawana chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka, tapota shandisa nesu nekupindura pasi apa. Tichagara tichikoshesa uye tichiremekedza pfungwa dzako.
Benfica Bhora Diary
Ignatius Jacob Kurume 17, 2019 Pa 12: 45 pm
Ndakashamiswa zvikuru naNuno uye nzira yake yakanakisisa yebhola .Kutora kwekupedzisira kwepu yeC Cup neManchester yakabatana yakasimbisa kutenda kwangu. Nzira iyo mhumhi yaive nayo yaive yakakosha uye ivo vakakodzera zvikuru kukunda .. moyo wangu unofadza pamusoro paNuno nevashandi vake vanoshanda nesimba. Ndiye mutungamiri akanaka kwazvo, anonyatsokurudzira uye anopa mazano. Zvakanakisisa zvandinoda kuti ndibudirire kubudirira.
Diego Simeone Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Carlo Ancelotti Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
Andre Villas-Boas Childhood Nhoroondo Plus Untold Biography Facts
Alex Ferguson Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
David Moyes Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts
Steven Gerrard Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts